Ganacsade lagu dilay magaalada Laascaano - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGanacsade lagu dilay magaalada Laascaano
April 8, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Bartamaha Laascano. [Sawirka]
Laascaanood-(Puntland Mirror) Nin ganacsade ah ayaa xalay lagu dilay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Niman hubeysan oo aan la garaneyn ayaa toogtay oo dilay Maxamed Cabdi Timir. Nimanka hubeysan ayaa goobta ka cararay dilka kadib.
Timir ayaa ahaa ganacsade caan ka ah magaalada, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Ma jirto cid weli sheegtay in ay iyagu ka dambeeyaan dilka ganacsadaha.